Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Tantara tamin’ny Oktobra 2018
Tantara · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Tantara tamin'ny Oktobra, 2018
Koety: Eto & Any
Miresaka mikasika ny ankehitrininy sy ny lasany ireo blaogera Koetiana amin'ity herinandro ity. Raha toa ka, eo amin'ny manodidina azy, mikaroka aingampanahy sy tetikasa ho an'ny hoavy ny blaogera roa, miroboka ao amin'ny tantara kosa ny iray hafa mba hamerenana ireo zon'ny Koetiana amin'ny fandidiana mikasika ny hoaviny. Mitatitra i...
Rosia: Lasa i Putin, Tonga i Medvedev
Lasa filoham-pirenena fahatelo ao Rosia post-Sovietika i Dmitry Medvedev tamin'ny Alarobia.
Manampy amin'ny fiarovana ny teny Bali ao Indonezia ity wiki ity
Manome rakibolana, tranom-boky miaraka amin'ny loharanom-baovao momba ny kolontsaina Balinezy, lalaon-teny, fitaovana fandikan-teny, ary endrika amin'ny teny Balinezy ao amin'ny pejy fandraisan'ny Google ny wiki. Azo ampiasaina amin'ny fampiharana Android ihany koa ny wiki.
Mpanoratra Alice Backer · Afrika Mainty
Topi-maso ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Libyana
Manankarena sy marevaka ny tontolon'ny bilaogy Libyana, saingy tsy dia ara-politika. Gaga hatrany aho mikasika ny fivoarany nandritra ny telo taona lasa. Mety vitsy ireo bilaogerany raha oharina amin'ireo firenena hafa, saingy fahagagana ny zava-misy fa mibilaogy ny olona sasany
Goatemala: Mahatsiaro ny Eveka Gerardi sy ny tatitra nataony “Aoka tsy hisy intsony!”
Folo taona lasa izay, navoakan'ny Eveka Juan Gerardi ny tatitra iray antsoina hoe "Goatemala, Aoka tsy hisy intsony!" izay nahitana fijoroana vavolombelona mahery vaika tamin'ireo izay niharan'ny fifandonana mitam-piadiana tao Goatemalà.
Kambodja: Fahatsiarovana Ny Fanafahana Sa Ny Fananiham-bohitra?
Mpanoratra Mong Palatino · Kambodza
Ny 7 janoary 1979, nesorina teo amin'ny fahefana ny fitondran'ny Khmer Rouge tao Kambodja. Voampanga ho nikotrika ny fandripahana Kambodjiana marobe maherin'ny iray tapitrisa ny fitondrana kaominista. Tamin'ny faran'ny herinandro, nanamarika ny tsingerintaona faha-30 taonan'ny fianjeran'ny Khmers Rouges ny governemanta Kambodjiana (amin'ny teny anglisy avokoa ny rohy rehetra). Saingy nizarazara...
Mpanoratra Jillian C. York · Afrika Mainty
Tsy manjavona any amin'ny toeram-pialokalofana ny mpitarika rehefa fantatr'izy ireo fa misy ny zava-doza lehibe mitranga ary avela ny mpanao fihetsiketsehana handeha amin'ny lalana mampidi-doza mba hahazoaka tombony amin'ny paikady politikany, tantara sy toerana taiza no tondroina amin'izany fihevitra izany, hoy ianao?
Masoarabo: Misaona an'i Mahmoud Darwish
Nisaona ny fahafatesan'ilay poeta Palestiniana Mahmoud Darwish androany ny bilaogera manerana ny tontolo Arabo. Lahatsoratra marobe no nivoaka an-tserasera tamin'ny teny Arabo sy Anglisy talohan'ny nanamafisana ny vaovao ofisialy momba ny fahafatesany.
Angola: Efa akaiky ny fifidianana andrasana mafy
Mpanoratra Clara Onofre · Afrika Mainty
Iiray volana latsaka sisa i Angola dia hiaina ny iray amin'ireo fizarana andrasana mafy eo amin'ny tantarany. Enina ambin'ny folo taona taorian'ny fifidianana farany, hanana fahafahana indray hampiasa ny zon'izy ireo hifidy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy ny Angolaniana, izay hatao ny 5 ka hatramin'ny 6 septambra.